पृथ्वीनारायण शाहलाई ‘नायक’ भनेपछि नारायणकाजीमाथि आक्रमण — OnlineDabali
काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले पृथ्वीनारायण शाहलाई नायक भनेका छन् । नेता श्रेष्ठले पृथ्वी जयन्तिको अवसरमा शाहलाई एकीकरणका प्रमुख नायक भन्दै श्रद्धञ्जली भनेका छन् ।
पृथ्वीनारायण शाहलाई नायक भनेपछि सामाजिक संजाल प्रयोगकर्ताहरुले आक्रमणको शैलीमा नेता श्रेष्ठको तीब्र आलोचना भएको छ । कम्युनिस्ट नेता भएर पनि समान्ती सत्ताको नाइकेलाई नायक बताउँदै भन्दै सामाजिक संजाल प्रयोगकर्ताहरुले तीव्र आलोचना गरेका छन् ।
प्रमोद जैसवालले नेता श्रेष्ठको भनाई हाँसो लाग्दो भएको बताएका छन् । उनले पृथ्वीनारायण शाहले गरेको एकीकरण ठिक भए संघीयता, स्वयत्त प्रदेशको नारा दिएर जनयुद्ध किन गरेको ? भन्दै नेता श्रेष्ठलाई प्रश्न गरेका छन् । उनले कि जनयुद्ध झुटो थियो कि श्रेष्ठको भनाई गलत भएको तर्क गरे ।
त्यस्तै किराती मानबहादुर राईले नेता श्रेष्ठ वर्णवादको मजबुतिकरणमा लागेको लेखेका छन् । उनले भारत एकीकरण गर्ने महाराणी भिक्टोरियाको जन्म दिवसलाई भारतीयहरुले राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउँछन् ? भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।
सामाजिक संजाल प्रयोगकर्ता उत्तमकुमार श्रेष्ठले नेता श्रेष्ठको भनाईप्रति असहमति जनाउँदै पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण नभएर सामन्ती राज्य विस्तार गरेको बताउँछन् । माके नेता श्रेष्ठले पृथ्वीनारायण शाहलाई श्रद्धाञ्जली भनेका छन् भने कुमार नेपालीले नेता श्रेष्ठलाई श्रद्धाञ्जी भनेका छन् । उनले श्रेष्ठको विचारको मृत्यु भएको बताउँदै श्रद्धाञ्जली गरेका हुन् । नेपालीले शाहको एकीकरण जनताको लागि नभएर सामान्ती सत्तालाई बलियो बनाउने उद्देश्यमा भएकोले राष्ट्र एकीकरण मान्नन नसकिने लेखेका छन् ।
त्यस्तै विवेक श्रेष्ठ नामका सामाजिक प्रयोगकर्ताले नेवारलगायत जनजातीमाथि विभत्स दमन गरेर सामान्ती राज्यलाई बलियो बनाउन गरिएको एकीकरणलाई राष्ट्रिय एकीकर मान्नि नसकिने बताएका छन् । उनले नेता श्रेष्ठको भनाईसँग असहमति जनाउँदै पृथ्वीनारायणलाई खलनायक भनेका छन् ।
त्यस्तै शिव आचार्यले नेता श्रेष्ठलाई विदेशीको गुलाम भन्दै अगाडि भन्छन्, “चालामाला देख्दा अचम्म लाग्छ यिनीहरुले आफ्ना आमा बहिनी र दिदी सबै बिदेशीलाई बेच्न बेर लगाउँदैनन् पैसाको लागि ।”
हरि कमरेड नाम गरेको फेसबुक प्रयोगकर्ताले नेता श्रेष्ठले उल्टो यात्रा सुरु गरेको बताएका छन् । त्यसैगरी राजकुमार हिङ्गफमाङले नेता श्रेष्ठको स्टाटस देखेर आफूलाई नै लाज लागेको लेखेका छन् ।
त्यस्तै प्रकाश अवालेले गएको वर्ष नेता श्रेष्ठले पृथ्वीजयन्ती मनाउनु पर्ने विचार राखेको बताउँदै भन्छ्न, “उहाँ त क्रान्तिकारी होइन रहेछ भन्ने त मलाई दुई तिन वर्षदेखि लागिसकेको थियो ।” जैसवाल पुनः लेख्छन् , “कमल थापा, पशुपति शमशेर, ओली, देउवा र नक्कली गण्तन्त्रवादीसम्मले पृथ्वीनारायणको बाटो अंगाल्न त सुहाउछ तर असली लोकतान्त्रिक चरित्रका भएकाहरुले शाहले सामान्ती सत्ता विस्तार गरेको हुन् । पृथ्वीनारायण शाहलाई विस्तारवादी मात्र हुन् ।”
सामाजिक संजालमा नेता श्रेष्ठलाई कम्युनिस्ट नेता नभएर राजावादी भएको पुष्टी भएको बताउँदै माओवादी भन्ने अधिकार नभएको समेत बताएका छन् ।
पूर्व माओवादी नेता बाबुराम भट्टराईले पनि पृथ्वीनारायण शाहको प्रसंशा गर्दै आएका थिए । अहिले श्रेष्ठले पनि खुलेरै बोले । उहाँहरुलाई गोरखाली भएकै कारण माया लागेको हो वा विचारमा आएको विचलन हो ? भन्दै प्रश्नग खडा गरिएको छ ।
विगतमा सरकारले हरेक पुस २७ गते पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्ती भव्य कार्यक्रम गरेर मनाउथ्यो तर गणतन्त्रपछिको माके अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले २०६४ बाट सरकारले पुस २७ लाई एकता दिवस नमनाउने निर्णय गर्दै दिँदै आएको सार्वजनिक विदालाई समेत खारेज गरेको थियो ।
पृथ्वीनारायण शाहलाई एकता होइन सामान्ती राज्य विस्तार गरेको भन्दैत राजतन्त्रको नै अन्त्यको लागि जनयुद्ध गरेको माओवादी र आफ्नो अधिकार खोसिएको भन्दै लामो समयदेखि विरोधमा रहेका आदिवासी तथा जनजातीहरु खुशी भएका थिए ।
त्यसको १० वर्षपछि फेरि सरकारले सार्वजनिक विदा दिँदै सरकारले एकता दिवस मनाएको छ । सरकारले विगतमा झैं औपचारिक रुपमा भव्य कार्यक्रम नगरेपनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पृथ्वीनारायण शाहको शालिकलाई माला लगाइदिइन् । गणतन्त्र नेपालकी राष्ट्रपतिले सामान्तीतन्त्रको नाइकाको शालिक अगाडि झुकेको भन्दै सामाजिक संजालमा विरोध पनि भइरहेको छ । प्रज्ञा प्रतिस्ठानले भने विशेष कार्यक्रम गरेको छ ।
अर्कोतिर आदिवासी जनजाती अगुवाहरुले पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो अधिकार खोसेको भन्दै कालो दिनको रुपमा विभिन्न कार्यक्रम गरे । उनीहरुले अधिकार खोस्नुको साथै जनजातीको नाक काटेको भन्दै हत्यारा भन्दै प्रतिकारात्मक रुपमा पृथ्वीनारायण शाहको शरीरमाथि सामुहिक रुपमा थुकेर पुस २७ मनाएका छन् । पृथ्वीनारायण शाह लेखिएको कागजमा जनजाती अगुवाहरुले थुकेका हुन् ।